Waa maxay macnaha muuqaalku? | Hal-abuurka khadka tooska ah
Adduunyada naqshadeynta, sawiradu waa qaybaha ugu muhiimsan ee isgaarsiinta muuqaalka Xirfadlayaasha, iyo kuwa maamula inay fariinta u gudbiyaan dadweynaha iyaga oo adeegsanaya.
Fariintan ku socota bulshada dhexdeeda, sawiradu waa inay ahaadaan wax lagu qanci karo, oo isla markiiba gudbi fariintaas.
Xirfadlayaasha naqshadeynta ayaa inta badan isticmaala odhaah muuqaal ah, maadaama ay tahay kheyraad qiimo leh marka ay timaaddo gudbinta fikradda si xooggan.
Maqaalkan, waxaan inta badan ka hadli doonaa habka muuqaalka xagga nashqadeynta garaafyada waxaanna ku qori doonaa xoogaa hadal ah oo sidoo kale loo adeegsaday naqshadeynta.
1 Waa maxay hadalka aragga?
2 Qaabka muuqaalka muuqaalka ah waa maxay?
3 Tirooyinka kale ee muhiimka ah ee hadalka ee naqshadeynta
3.1 sarbeeb muuqaal ah
3.2 isbarbardhigga muuqaalka
3.3 hyperbole muuqaal
3.4 muuqaal muuqaal ah
Waa maxay hadalka aragga?
Si aad u fahamto habka ugu fudud waxa uu yahay odhaah muuqaal ah, waa sida waxyaabaha aan aragno ay nagu qanciyaan. Laakiin ma aha oo kaliya fikradda ka dambeysa sawirada, laakiin sida qofku u fasirayo, oo macne u siinayo macluumaadkaas.
Waxay ku bilaabataa waxa aynu indhaheenna ku aragno, waxayna ku dhammaanaysaa tafsiirkii aynu siinnay; waa isaga jidka u dhexeeya indhaheenna iyo maskaxda. Marka la soo koobo, waa farshaxanka isticmaalka sawirada si fariin loogu gudbiyo dadweynaha.
Waxa lama huraanka u ah in la fahmo hadal-haynta aragga waa in lagu bilaabo falanqaynta waxa muuqda, gartaan fariinta ugu weyn ee sawirka aan ilaalino. Wax yar, waxaynu si guud u falanqeyn doonaa halabuurkii, jawaabahana u heli doonnaa su'aalaha ay ka mid yihiin, Waa maxay waxa ugu yaabka badan sawirka ina hor yaal?
Marka aynu si gaar ah u ogaano curiyayaasha, annagu wuxuu falanqeeyaa cilmu-nafsiga midabka, isticmaalka qoraalka iyo halabuurka.
Waxay u muuqataa mid adag, laakiin si ka soo horjeeda, dhab ahaantii mar haddaan ka soo baxnay albaabka guriga hadal haynta muuqaalku waa joogtaa, tusaale ahaan qaabeynta dhismayaasha. Anaguna, marka loo eego waxbarashadeena, da'deena, waayo-aragnimadeena, iwm. waa waanu xukumaynaa. Waana taas, waa in aynu niyadda ku hayno in isku sawirku uu qof ama qof kale ula jeedo waxyaalo kala duwan, iyada oo ay sababtu tahay dhaqankiisa, waxbarashadiisa, bulshadiisa, iwm.
Qaabka muuqaalka muuqaalka ah waa maxay?
Waan fahamsanahay metonymy oo ah kelmad ama odhaah aynu ku isticmaalno beddelkeeda mid kale oo ay xidhiidh la leedahay. Metonymy waxay si dhow ula xiriirtaa hal-abuur kale, sarbeeb ahaan.
Erayada macnuhu waa tirooyinka loo isticmaalo maalinba maalinta ka dambaysa sheeko kasta oo aan leenahay, iyo sidoo kale adduunka suugaanta.
Dunida naqshadeynta garaafyada, metonymy waxaa loo adeegsadaa marka ay jirto wareejinta macnaha hab associative, taas oo ah, Astaanta ku beddel summada leh, ta aan la taaban karinna ku beddel shubka. Waa in shay, fikrad ama shay lagu magacaabo magac kale oo uu xidhiidh la leeyahay, kaas oo noqon kara xidhiidh sabab ama ku-tiirsanaan.
Halbeegga muuqaalka ee goobta fanka ayaa loo fahmay sida sawir calaamad ah oo loo isticmaalo in lagu abuuro macne dhab ah oo dheeraad ah. Dadweynuhu waxay abuuraan xidhiidh ka dhexeeya sawirka la arkay iyo macnaha maskaxdooda ka soo baxa.
Marka xigta waxaanu arki doonaa taxane muuqaal ah oo habab muuqaal ah oo ay sameeyeen noocyo kala duwan. Taas oo aan ku arki karno sida ay shayga dhabta ah iyo shayga la tilmaamay waxay leeyihiin xidhiidhka sabab-saamaynta oo aan horay uga soo hadalnay. Xayeysiiska, magacyo badan ayaa raadiya xiriirka macnaha u dhexeeya naftooda iyo shayga la muujiyay.
Tusaalahan waxaan ku arki karnaa sida orange-gu u bedelo qasac soodhaha, oo uu u diro fariinta sida dabiiciga ah iyo caafimaadka leh cabitaankiisu.
Tani waa tusaale kale oo cad oo ku saabsan sida calaamaddu isku daydo in ay ku beddesho baakaddeeda miro, iyada oo u diraysa farriinta in alaabteedu tahay mid dabiici ah oo tayo sare leh.
Maraqa American Tabasco, iyada oo loo marayo sawirkan iyo isticmaalka sawirka metonymy, ayaa caddaynaya in suugodiisu tahay bamka.
Fanta waxay si cad u sheegtay inay damacsan tahay iyada oo ku beddeshay carrabka moodeelka strawberry cas oo casiir leh, halkaas oo ay noogu soo dirto farriinta in dhadhankiisu yahay mid dabiici ah oo awood leh.
Ugu dambayntii, waxa aanu la kulanay ololahan Coca Cola oo ay ku soo bandhigtay cabitaankeeda macaan ee liin dhanaanta leh. Sawirkan, metonymy ayaa laga helay nuxurka, kiiskan diirka liin si uu u muujiyo weelka u noqon lahaa dhadhanka cabitaanka.
Tirooyinka kale ee muhiimka ah ee hadalka ee naqshadeynta
Hadal-haynta muuqaalku waxa ay ka kooban tahay tibaaxo kala duwan oo hadal ah. ka dibna waxaynu magacaabi doonaa afar ka mid ah kuwa ugu badan ee loo isticmaalo xayaysiinta iyo qaybta naqshadaynta, marka laga reebo habka muuqaalka hore ee la falanqeeyay.
sarbeeb muuqaal ah
Sarbeebta muuqaalka waxaa loo fahmay sida isbarbardhigga laba walxood oo muuqaal ah. Sawirrada la barbar dhigay ee sarbeebaha maaha in ay isku xidhan yihiin, xitaa haddii ay isku mid yihiin.
Mid ka mid ah naqshadeeyayaasha ugu caansan ee loo isticmaalo shaxan waa Chema Madoz.
Nuxurka isbarbardhigga ayaa ah abuur muuqaal muuqaal ah oo u dhexeeya waxyaabo kala duwan, haddii isbarbardhigga uu yahay mid aad u adag ama lagu qasbay, shacabku ma fahmi doonaan.
Aragtida sarraysa ama waxa la mid ah buunbuunin muuqaal ah si loo muujiyo dhinac ama muuqaal ee alaabta ama adeegga la bixiyo.
Sawirka muuqaalka ah ayaa loo adeegsaday abuur xidhiidh ka dhexeeya sifo iyo badeecad, si uu daawadayaashu ula xidhiidho sifadaas alaabta la yidhi. Tusaale ahaan, adigoo isticmaalaya midabada cagaaran iyo sawirada dabeecadda si loo dhiso xiriir ka dhexeeya alaabtaada iyo deegaanka.
Hadal-haynta muuqaalka, sidaan soo aragnay, waxaa badanaa loo adeegsadaa adduunka xayeysiinta iyo naqshadeynta. Waa mid ka mid ah Qalabka ugu muhiimsan, kaas oo lagu wada xiriiro laguna dhiso fariimaha muuqaalka ah si asal ah inuu ku tuuro daawadayaasha.
Waxaan rajeynayaa in maqaalkani uu kaa caawiyay inaad si fiican u fahamto macnaha muuqaalka, iyo waxa ku hareeraysan. Haddii aad hayso wax su'aalo ah ama soo jeedin ah si aad u hagaajiso maqaalka, waxaad ku dhaafi kartaa sanduuqa faallooyinka ee aad ka heli doonto dhammaadka maqaalkan. Ku arag boostada xigta ee Creativos Online.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » Design Graphic » Waa maxay macnaha muuqaalku?
Taariikhda astaanta Kia